Manchester City oo tallaabo u qaaday soo xero gelinta John Stones, iyadoo saxiixiisa ku garaaci karta Chelsea – Gool FM
Manchester City oo tallaabo u qaaday soo xero gelinta John Stones, iyadoo saxiixiisa ku garaaci karta Chelsea
Haaruun July 13, 2016
(Manchester) 13 Luuliyo 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay tallaabo u qaaday xiisaheeda daafaca dhexe ee Everton John Stones.
22-sano jirkaan ayaa si wayn loola xiriirinayey inuu ka dhaqaaqi doono garoonka Goodison Park xagaagan, kaddib markii xilli ciyaareed niyad jab ah uu ku qaatay 2015-16.
Chelsea ayaa dhowr dalab oo ay ka gudbisay daafacan laga diiday xagaagii hore, laakiin Man City ayaa lagu soo waramayaa inay ugu cad-cadahay waqtigan inay ku guuleystaan saxiixiisa.
The Guardian ayaa warinaysa in xiddiga xulka qaranka Ingiriiska uu u sheegay kooxda Everton inuu doonayo inuu isaga tago, isla markaana uu macallinka cusub ee Man City Pep Guardiola kula biiro Etihad Stadium.
City ayaa la fahansan yahay inay suuqa ka baadi goobeyso daafac dhexe oo cusub, kaddib dhaawacyada ku soo noq-noqday Vincent Kompany xilli ciyaareedyadii dhawaa, kooxda ayaana sidoo kale la la xiriinayay inay qiime sare ugu dhawaaqdo daafaca Juventus ee Leonardo Bonucci.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in £50m uu Stones uga tagayo kooxda ka dhisan Merseyside-ka.
Daafaca Liverpool ee Mamadou Sakho oo dhaawac ku seegi kara bilowga xilli ciyaareedka cusub
DAAWO: Barcelona oo soo bandhigtay 10-kii gool badbaadin ee ugu fiicnaa oo ay sameeyeen goolhayeyaasheeda xilli ciyaareedkii 2015/16